Malunga nathi -Shaguang Giant Window Blinds Co., Ltd.
Shouguang Giant Window Blinds Co., Ltd.ise kwidolophu entle yemifuno-shouguang, China.
Yayisungulwa kwi-2012, inkampani yabazali i-KEO ESANGSA SEOUL yambathiswa eSeoul, Korea, eyasekwa ngo-2005, ibandakanyeka kwiimfama zeenkuni.
Ngo-2012, i-Shouguang Giant Window Blinds Co., Ltd. yasekwa ukuvelisa ii-slats zomthi ze-KEO KWI-SANGSA SEOUL, iqinisekisa ukomelela kunye nomgangatho olungileyo ngonikezelo olukhawulezayo.
Ngoku ikakhulu sinikezela ngePaulownia venetian blinds, iPine venetian
iimfama, iBasswood venetian blinds, Bamboo venetian blinds kunye neAyous wood venetian blinds.
IIMFANEKISO ZEWINDLE EZIIMFANEKISO CO., LTD.yinkampani ngokukodwa kwimveliso yeemfama zomthi. Iminyaka emininzi, besigxile ekuvelisweni kweendlela ezahlukeneyo zamakhethini enkuni kunye neeslats ezimfamekileyo. Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi nakwimimandla zaphesheya. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu, iinkonzo zobungcali, ulawulo olungqongqo lomgangatho, amaxabiso afanelekileyo kunye nomxholo wemveliso eluhlaza ukuze siphumelele abathengi abaninzi nangakumbi.
Sivelisa kwaye sikhulise iintlobo zezitayile zeemfama zamaplanga kunye neeplats zamaplanga ezenziwe ngamaplanga, ngokwezinto ezahlukeneyo zinokwahlulwa zibe ngumthi wepaulownia, iinkuni zepine, i-basswood, i-bamboo kunye ne-ayous wood; ngokwenkqubo yokuvelisa inokwahlulwa ibe yimfama eqinileyo yomthi, iipeyinti zomthi ezipeyintiweyo, amakhethini eenkuni zakudala. Ukongeza, sikwathengisa ngenkohliso yeemfama ze-venetian blinds, i-aluminium venetian blinds, i-roller blinds kunye ne-blinds accessories.
Sibonelela abathengi ngeenkonzo zobungcali kunye nezibanzi. Iqela lethu lokuvelisa kunye neqela lokuthengisa liye labandakanyeka kwimveliso kunye nokuthengiswa kweemfama zomthi ngaphezulu kweminyaka emi-5. Banamava atyebileyo kwaye baya kuphendula nayiphi na imibuzo kuwe iiyure ezingama-24 ngosuku.
ULAWULO LOMGANGATHO WESICWANGCISO
Sineqela leQC elingqongqo ukulawula umgangatho wemveliso, yonke imiba yemveliso inokujongwa ngokungqongqo ukuqinisekisa ukuba imveliso yokugqibela ngokungqinelana neemfuno zabathengi kunye nemigaqo yexesha lokuhanjiswa kweempahla.
I-Giant Window Blinds Co., Ltd. ihlala ihambelana nombono wentsebenziswano yokuphumelela. Emva kweminyaka yentsebenziswano nabathengisi bethu, siye saseka ubudlelwane bokuthembana obuqine kakhulu omnye nomnye, ovumela iimveliso zethu ukuba zibe nomgangatho ozinzileyo kunye namaxabiso okhuphiswano.
INGQIQO EBANOKUHLAWULA I-ECO
Ukusukela oko yasekwayo, iWindows Window Blinds ibambelele kwingcinga yemveliso eluhlaza kunye ne-eco-friendly. Emva kokuzama okuqhubekayo kwenkampani kunye nokuyila izinto ezintsha, ekugqibeleni yafaka ukutyabeka okungasetyenziswanga kuManzi kwimveliso yeeslats ezingaboniyo, ezenza izinto ezintsha kumzi mveliso weemfama. Iimveliso zethu zilupasile ukhuseleko lokusingqongileyo kunye novavanyo lokulwa neentsholongwane. Kwixesha elizayo siza kuqhubeka nokwenza izinto ezintsha kwaye sizise iimveliso ezisefashinini nezisempilweni kubathengi bethu.
Siye blinds kunye namacandelo mveliso. Iquka indawo engama-60,000 eemitha zesikwere, indawo yokusebenzela yokusebenzela ukuya kuthi ga kwi-15,000 yeemitha zesikwere zeeseti ezingama-78 zezixhobo zemveliso kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-40 kubandakanya ngaphezulu kwe-10 yobuchwephesha kunye nomntu we-QC.
Njengoko ifom yokhuselo lokusingqongileyo iya isiba mandundu ngakumbi nangakumbi, ngowama-2020, inkampani yeGiant isebenza ukungagungqi okungasekelwanga Amanzi kwimveliso yeemfama, into entsha kushishino lweemfama. Iimfama zethu ziluphumelele uvavanyo lwe-SGS, Giant kuphela yokubonelela ngeemveliso ezinobungakanani.
Inkampani enkulu isebenza ngokunyaniseka njengomgaqo wokuqala, ukudala ixabiso kubathengi njengoxanduva, ukubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni ophezulu ngamaxabiso afanelekileyo kunye neemveliso ezisemgangathweni.
Inkampani enkulu ijonge ukusebenza nabahlobo abaninzi kwintsebenziswano enyanisekileyo yokuqonda ukuphumelela.